2 Samuel 18 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
18 Devid wee gụọ ndị so ya ọnụ, họpụtakwara ha ndị isi otu puku otu puku ndị agha na ndị isi otu narị otu narị ndị agha.+ 2 Devid mekwara Joab+ onyeisi otu ụzọ n’ụzọ atọ+ nke ndị agha ahụ, mee Abishaị+ nwa Zeruya, nwanne Joab,+ onyeisi nke otu ụzọ n’ụzọ atọ, meekwa Ịtaị+ onye Gat onyeisi nke otu ụzọ n’ụzọ atọ, wee zipụ ha. Eze wee sị ha: “Mụ onwe m ga-esorịrị unu gaa.” 3 Ma ha sịrị: “Ị gaghị aga,+ n’ihi na o nwee ka anyị si gbaa ọsọ, obi ha agaghị adị n’ebe anyị nọ;+ ọ bụrụkwa na ọkara n’ime anyị anwụọ, obi ha agaghị adị n’ebe anyị nọ, n’ihi na i ruru puku mmadụ iri n’ime anyị;+ ọ ga-aka mma ma ị nọrọ n’obodo na-enyere anyị aka.”+ 4 Eze wee sị ha: “M ga-eme ihe ọ bụla dị mma n’anya unu.”+ Eze wee kwụrụ n’akụkụ ọnụ ụzọ ámá,+ mmadụ niile wee pụọ n’ìgwè dị otu narị mmadụ otu narị mmadụ nakwa n’ìgwè dị otu puku mmadụ otu puku mmadụ.+ 5 Eze wee nye Joab na Abishaị na Ịtaị iwu, sị: “Werenụ nwayọọ meso+ nwa okorobịa ahụ bụ́ Absalọm ihe n’ihi m.” Mmadụ niile wee nụ mgbe eze nyere ndị isi ahụ niile iwu banyere Absalọm. 6 Ha wee pụọ gawa n’ọhịa ibuso Izrel agha; e wee lụọ agha ahụ n’oké ọhịa Ifrem.+ 7 N’ikpeazụ, e meriri+ ndị Izrel+ n’ebe ahụ n’ihu ndị na-ejere Devid ozi, ndị e gburu n’ebe ahụ n’ụbọchị ahụ wee dị ukwuu, puku ndị ikom iri abụọ. 8 Agha ahụ wee gbasaa n’ala ahụ dum. Oké ọhịa ahụ rikwara ndị mmadụ karịa ka mma agha riri n’ụbọchị ahụ. 9 E mesịa, Absalọm hụrụ onwe ya n’ihu ndị na-ejere Devid ozi. Absalọm nọkwa n’elu ịnyịnya ibu gbara na-aga, ịnyịnya ibu ahụ wee banye n’okpuru alaka tụhịkọtara atụhịkọta nke nnukwu osisi gbara agba. Isi ya wee konye ná nnukwu osisi ahụ. O wee koro n’elu+ mgbe ịnyịnya ibu ahụ nke bu ya gbafeere. 10 Otu nwoke wee hụ ihe merenụ ma kọọrọ Joab,+ sị: “Lee! Ahụwo m Absalọm ka o koro ná nnukwu osisi.” 11 Joab wee gwa nwoke ahụ nọ na-akọrọ ya ihe ahụ, sị: “Ị hụrụ ya, gịnịkwanụ mere i gbughị ya n’ebe ahụ ka ọ daa n’ala? Ihe m gaara eme abụrụzie inye gị mkpụrụ ego ọlaọcha iri na ájị̀.”+ 12 Ma nwoke ahụ sịrị Joab: “Ọ bụrụgodị na a tụọ otu puku mkpụrụ ego ọlaọcha n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀ wụnye m n’ọbụ aka, agaghị m esetị aka m metụ nwa eze; n’ihi na ọ bụ ná ntị anyị ka eze nyere gị na Abishaị na Ịtaị iwu, sị, ‘Lezienụ anya, onye ọ sọrọ gị bụrụ, banyere nwa okorobịa ahụ bụ́ Absalọm.’+ 13 Ma ọ́ bụghị ya, m gaara eji aghụghọ meso mkpụrụ obi ya ihe, a gaghịkwa ezoro eze ihe a dum ezoro,+ gị onwe gị kwa anọrọ n’akụkụ.” 14 Joab wee sị: “Ka m ghara igbuwe onwe m oge otú a n’ihu gị!” O wee chịrị ube atọ n’aka ya wee gaa manye+ ha n’obi+ Absalọm mgbe ọ ka dị ndụ n’etiti nnukwu osisi ahụ. 15 Mmadụ iri na-eje ozi bụ́ ndị bu ngwá agha Joab wee bịa gbuo Absalọm.+ 16 Joab wee fụọ opi+ ka ndị agha ahụ lọghachi wee kwụsị ịchụ Izrel; n’ihi na Joab emewo ka ha kwụsị. 17 N’ikpeazụ, ha buuru Absalọm tụba ya n’ime nnukwu olulu dị n’oké ọhịa wee tụkọjuo nkume n’elu ya.+ Ma Izrel dum gbalara, onye ọ bụla n’ụlọ ya. 18 Mgbe Absalọm dị ndụ, o buuru otu ogidi gwunyere ya onwe ya+ na Ndagwurugwu Eze,+ n’ihi na ọ sịrị: “Enweghị m nwa nwoke nke ga-eme ka a na-echeta aha m.”+ O wee gụọ ogidi ahụ aha ya,+ a na-akpọkwa ya Ihe Ncheta Absalọm ruo taa. 19 Ma Ahimaz+ nwa Zedọk sịrị: “Biko, ka m gbara ọsọ gaa kọọrọ eze ihe merenụ, n’ihi na Jehova ekpepụtawo ya n’aka ndị iro ya.”+ 20 Ma Joab sịrị ya: “Ọ bụghị gị ga-aga kọọ nke taa, ụbọchị ọzọ gị akọwa; ma ị gaghị akọ ihe merenụ taa, n’ihi na nwa eze anwụọla.”+ 21 Joab wee gwa onye Kush+ ahụ, sị: “Gaa kọọrọ eze ihe ị hụrụ.” Nwoke Kush ahụ wee kpọọrọ Joab isiala wee gbara gawa. 22 Ahimaz nwa Zedọk wee gwa Joab ọzọ, sị: “Ihe ọ bụla ga-eme, ya mee. Biko, ka mụ onwe m kwa gbara ọsọ soro onye Kush n’azụ.” Otú ọ dị, Joab sịrị: “Nwa m, gịnị mere gị onwe gị ga-eji gbara gawa mgbe ọ na-enweghị ihe ị na-aga ịkọ?” 23 Ma ọ sịrị: “Ihe ọ bụla ga-eme, ya mee, ka m gbara gawa.” O wee sị ya: “Gbara gawa!” Ahimaz wee si n’ụzọ Ógbè Jọdan+ gbara gawa wee mesịa gbafere onye Kush ahụ. 24 Devid nọ ọdụ n’agbata ọnụ ụzọ ámá abụọ.+ Ka ọ nọ n’ebe ahụ, onye nche+ rịgooro n’elu ụlọ nke ọnụ ụzọ ámá dị n’akụkụ mgbidi. E mesịa, o lepụrụ anya hụ, ma, lee! e nwere otu nwoke ji ọsọ na-abịa naanị ya. 25 Onye nche ahụ wee kpọọ eze gwa ya, eze wee sị: “Ọ bụrụ na ọ bụ naanị ya na-abịa, ọ dị ihe ọ na-abịa ịkọ.” O wee na-abịa, na-abịarukwu nso. 26 Onye nche ahụ wee hụ nwoke ọzọ ka o ji ọsọ na-abịa. Onye nche ahụ wee kpọọ onye nche ọnụ ụzọ ámá, sị: “Lee! Nwoke ọzọ ji ọsọ na-abịa naanị ya!” eze wee sị: “Onye nke a kwa nwere ihe ọ na-abịa ịkọ.” 27 Onye nche ahụ wee gaa n’ihu ịsị: “M na-ahụ na ụkwụ ọsọ onye nke mbụ dị ka ụkwụ ọsọ+ Ahimaz+ nwa Zedọk,” eze wee sị: “Ọ bụ ezi mmadụ,+ ọ bụkwa ozi ọma+ ka o ji abịa.” 28 N’ikpeazụ, Ahimaz kpọrọ eze wee sị: “Nsogbu adịghị!” O wee kpọọrọ eze isiala. O wee gaa n’ihu ịsị: “Ka Jehova bụ́ Chineke gị bụrụ onye a gọziri agọzi,+ onye nyefere n’aka gị+ ndị buliri aka ha imegide onyenwe m eze!” 29 Otú ọ dị, eze jụrụ, sị: “Nwa okorobịa ahụ bụ́ Absalọm ọ̀ dịkwa mma?” Ahimaz wee zaa, sị: “Ahụrụ m oké ọgba aghara mgbe Joab zipụrụ onye na-ejere eze ozi nakwa ohu gị, amaghịkwa m ihe merenụ.”+ 30 Eze wee sị: “Gaa n’akụkụ, guzo n’ebe a.” O wee gaa kwụrụ n’akụkụ. 31 Ma, lee, onye Kush+ ahụ batara, onye Kush ahụ wee malite ịsị: “Ka onyenwe m eze nụrụ ozi, n’ihi na Jehova ekpepụtawo gị taa n’aka ndị niile na-ebili imegide gị.”+ 32 Ma eze jụrụ onye Kush ahụ, sị: “Nwa okorobịa ahụ bụ́ Absalọm ọ̀ dịkwa mma?” Onye Kush ahụ wee zaa, sị: “Ka ndị iro onyenwe m eze na ndị niile biliri ime gị ihe ọjọọ dịrị ka nwa okorobịa ahụ.”+ 33 O wee wute eze, o wee gbagoo n’ọnụ ụlọ dị n’elu ụlọ+ nke ọnụ ụzọ ámá kwaa ákwá; ọ nọkwa na-agagharị, na-ekwu, sị: “Nwa m Absalọm, nwa m, nwa m+ Absalọm! Ọ gaara akara m mma ma a sị na ọ bụ m nwụrụ kama gị onwe gị ịnwụ, Absalọm nwa m, nwa m!”+